Malunga nathi -Fujian Joborn Machinery Co., Ltd.
UFujian Joborn Machinery Co., Ltd. uhlala "kwisixeko samatye eChina" -china, shuitou, uhlala kwindawo emalunga neehektare ezingama-60, ngaphezulu kweemitha zesikwere ezingama-20 000 zezityalo ezisemgangathweni zangoku kunye nangaphezulu kweemitha zesikwere ezingama-4000 zesakhiwo solawulo. uphando kunye nophuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo kwenye izixhobo imveliso ilitye umenzi. Kuqokelelwe ubutyebi bamava, ubuchwephesha obugqibeleleyo kunye ne-zero-umgama kwiinkonzo ezijikelezayo ziqinisekisa ukuba inkampani ifumana igama elihle kwintengiso.
Iimveliso eziphambili zi-SQC450 / 600 / 700-4D umatshini wokusika ibhulorho, SQC1200-4D umatshini wokusika ibhulorho ophakathi, SQC2200 / 2500 / 2800-4D umatshini wokusika ibhloko, i-SQ / PC-1300 umatshini wokumila okhethekileyo, i-SPG resin series wokucoca ngokuzenzekelayo umatshini njalo njalo. Umgangatho wokuqala yinjongo yenkampani yethu inkampani iseke iSebe lolawulo lomgangatho wobungcali, lixhotyiswe ngezixhobo zokulinganisa uvavanyo oluphambili, inkqubo yovavanyo engqongqo, ukusuka ekuthengeni izinto ezingavuthiweyo ukuya kwindawo yokugcina imveliso; iinkqubo ezahlukeneyo zilawulwa ngokungqongqo, ukuqinisekisa ukuba iimveliso ezenziweyo ziphezulu.
Inkampani igcina umoya "ophambili ngabantu, gcina ngomgangatho, uphumelele ngokugqwesileyo, ngomzobo omtsha", kwikamva elizayo inkampani iya kubonelela ngobuchwephesha kwitekhnoloji kunye nesimo sengqondo esihlala siphucula umgangatho wenkonzo kumandla "e-China evelisa. 2025 ", yokuvuselela izixhobo zamatye eTshayina kunye nemizamo engadinwayo.
JOBORN Oomatshini bakhe iqela lobungcali elinamava atyebileyo kwimveliso yoomatshini bamatye. Kuba ngaphezu kweminyaka engama-20, ngaphezu kwama-60,000 izixhobo ilitye lemveliso amava atyebileyo kunye nokuqokelelwa kobugcisa ziye zenza iteknoloji yenkampani ukuba isoloko phambili koontanga bayo, ngokwenza i inzuzo kwezobugcisa imveliso, kwaye Ngokukhawuleza ukubonisa ubuchwepheshe ilitye processing zakutshanje kunye neemfuno zabaxumi ukuveliswa kweemveliso, ukwenza iteknoloji kunye neemveliso ngaphambili kolu shishino.
Oomatshini baseJoborn bagcina umoya-siseko weshishini "ophambili ngabantu, gcina ngomgangatho, uphumelele ngokugqwesileyo, ngomzobo omtsha". Thatha iimfuno zabathengi njengeziko, thatha ukwaneliseka kwabaxumi njengesiqalo, ngesantya esikwinqanaba lokuqala, iteknoloji yodidi lokuqala, isimo sengqondo kwiklasi yokuqala ukufezekisa "ukugqitha kulindelo lwabathengi, ngaphaya komgangatho wenkonzo" ekujolise kuyo, ukubonelela abathengi nge pre ebanzi -sale, intengiso, yonke inkqubo yenkonzo emva kokuthengisa.